५ वर्षपछि साफ सेमिफाइनलमा नेपाल !
काठमाडाै,भदाै २४ । नेपाल ५ वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल पुगेको छ । नेपालले शनिबार बंगलादेशको ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा भएको खेलमा बंगलादेशलाई २-० ले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलको बाटो तय गरेको हो । जितसँगै नेपाल समूह ‘ए’ को बिजेता पनि बन्यो ।
नेपाल साफ च्यम्पियनसिपको इतिहासमा सेमिफाइनल पुगेको यो चौथोपटक हो । यसअघि सेमिफाइनल पुगेको तीन उपलब्धि विदेशी प्रशिक्षकको नेतृत्वमा प्राप्त भएको थियो । अघिल्लाे पटक सन् २०१३ मा नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेकाे थियाे । अहिले २०१८ मा पुग्दा फेरी सेमिफाइनलमा पुगेकाे छ । यस बिचमा अन्तराल हेर्दा नेपाल ५ वर्ष पछि पुन: सेमिफाइनलमा पुगेकाे छ ।
यसपल्ट नेपाली प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले यो उपलब्धि हात पारेका छन् । २०१३ मा प्युटोरिकोका ज्याक स्टेफेनोस्कीले नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलसम्म पुर्‍याएका थिए । नेपालले अब सेमिफाइनलामा खेल्ने प्रतिद्वन्द्वीको निर्णय आइतबार भारत र माल्दिभ्सबीच हुने खेलले गर्ने छ । यी दुर्इ मध्य जितेका एक टाेली सँग नेपालले प्रतिसपर्धा गर्नेछ ।
साफ च्याम्पियनसीप: शनिबार नेपालको अग्निपरीक्षा
दर खाँदा साढे ३ सय विरामी ?
मन्त्री फेर्ने विषयमा बोले प्रधानमन्त्री !
हेलिकोप्टर दुर्घटना: ६ जनाको मृत्यु, आनी जिवितै भेटिइन्